Andavamamba Leo fofona kafe ny mponina, feno setroka ny tanàna
Velon-taraina ireo mponina etsy Andavamamba noho ny fisiana ozinina iray mpanodina kafe eny an-toerana.
Manetroka tsy mitsahatra mantsy izy io sady mamoaka fofona kafe mahery vaika izay tsy maintsy hiainana isan’andro. Raha araka ny nambaran’ireo solontenan’ny mponina omaly dia ireo ankizy madinika mpianatra manodidina ity ozinina ity no tena mahita faisana. Tsy mahare fofona afa-tsy kafe mantsy izy ireo ao an-dakilasy isan’andro nefa na ireo mpandalo aza tsy mahatanty. Mangataka ny amin’ny tokony hampiakarana ho ambony kokoa ilay fitaovana mamoaka setroka ao amin’ity ozinina iray ity ireo mponina ao Andavamamba. Eo koa ny fanamboarana ny fotodrafitrasa hanjary ho tena manara-penitra ho fitsinjovana ny fahasalaman’izy ireo. Tsiahivina fa tafiditra afovoan-tanàna mihitsy ity ozinina iray mpanodina kafe ao Andavamamba ity.